Solony 8 hamoronana infografika haingana | Famoronana an-tserasera
Solony 8 hamoronana infografika haingana
Ny famoronana infografika dia afaka manome a tombony fanampiny amin'ny atiny ary noho izany dia afaka manatsara azy ireo bebe kokoa amin'ny mpanaraka sy mpamaky antsika. Tsy maintsy manenjika firafitra sy famolavolana ny mombamomba antsika isika izay mazava, azo vakina ary misy hatsarana mahafinaritra. Na dia ampirisihina aza isika hampivelatra ny infografika ataontsika amin'ny alàlan'ny programa fanovana nomerika, dia tsy maintsy jerentsika ireo fitaovana rehetra izay hanampy antsika hitahiry fotoana nefa tsy hanadino ny kalitaony.
Ireto misy safidy 8 eto amin'ny Internet izay azoko antoka fa tena hahasoa azy:
6 Ahoana ny momba ahy
Ity fampiharana ity dia hamela anao hamorona infografika manintona avy amin'ny rafitra miorina amin'ny modely izay azo ovaina amin'ny alàlan'ny rafitra mitete sy milatsaka hametrahana sy hanaisotra ireo singa. Io dia hahafahanao manamboatra ny loko sy ny endritsika ary misafidy ny vahaolana tsara indrindra amin'ny karazany marobe ary amin'ny tsindry iray monja. Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra momba an'i Piktochart dia ny manome ny fahafaha-manondrana ny volavolanay amin'ny endrika HTML ary mazava ho azy amin'ny fanohanana sary. Izy io dia manana kinova maimaimpoana tanteraka sy kinova premium. Amin'ny voalohany dia afaka miditra modely telo isika ary amin'ny faharoa dia 15 manontolo.
Ity sehatra ity dia tena mitovy amin'ny iray teo aloha. Izy io dia mamela ny famoronana infografika manintona amin'ny alàlan'ny rafitra template izay azontsika ovaina amin'ny alàlan'ny fisintomana sy fandatsahana ireo karazana singa rehetra (marika, tsipika, endrika, sary, sns ...) hahazoana ny valiny tadiavintsika. Manolotra antsika ny fahafaha-manondrana ny zavatra noforoninay tamin'ny endrika toy ny pdf, jpg, png na tranonkala zaraina mivantana amin'ny Internet.
Raha mila mamorona sary ianao ary maneho ny angon-drakitrao amin'ny fomba manintona, dia mety tena ilaina ity fitaovana ity. Infogr.am dia hamela anao mampakatra mivantana ny angon-drakitrao manokana hamolavolana ny tabilao. Azonao atao ny misintona azy ireo ho toy ny sary na mahazo ny kaody html anao hanampiana azy amin'ny pejin-tranonkalanao. Mazava ho azy, ahafahanao mamorona infografika miaraka amin'ireo sary ireo koa amin'ny alàlan'ny modely isan-karazany, na dia tokony ho fantatrao aza fa raha hampiasa azy io dia ilaina ny mampahafantatra ny tenanao amin'ny kaonty Twitter na Facebook anao.
Ity safidy ity dia miavaka amin'ny famoronana sary ary manolotra antsika rafitra iray tena mahay mamantatra izay ahafahantsika misafidy ny karazan-tsary izay tiantsika hamboarina, toy ny sary Venn, karazana boribory, bara ... Ny dingana manaraka dia tsy bebe kokoa Tsy maintsy ampidirintsika ny angon-drakitra ataontsika, ampanjifaina ny loko, ny endritsika ary ny habe ary alao mivantana mba hampidirina ao amin'ny tranonkalantsika.
Mamela anao hamorona infografika mahaliana amin'ny alàlan'ny fironana sy hetsika vaovao misy fiatraikany amin'ny tambajotra sosialy. Ny rafitr'izy ireo dia mamela antsika hisolo tena ny angona nalaina avy tamin'ny tenifototra. Safidy tsara io raha toa ka ny zavatra ezahintsika aroso dia famintinana zava-misy manan-danja na fanangonana tahirin-kevitra izay takian'ireo mpampiasa maro ankehitriny.
Ahoana ny momba ahy
Ity sehatra natombok'i Intel ity dia hahafahanao mampivelatra ny infografika anao manokana hanehoana ny asanao sy ny fisiany amin'ny tambajotra sosialy rehetra. Ao amin'ny sary misy azy, ny angona tahak'ireo fanavaozana ny sangan'asa izay nataontsika, ireo lahatsoratra izay nisy fiatraikany betsaka tamin'ny Facebook, ohatra, ny sary hita matetika na ny fahita matetika amin'ny famoahana.
Raha mila mahazo antontan-taratasy mifandraika amin'ny lohahevitra na fanontaniana ianao, Google Public Data Explorer dia afaka manampy be. Ity tranonkala ity dia mifototra amin'ny fampahalalana natambatra tamin'ny antontan-taratasy malaza sy fikambanana statistika manerantany toa an'i Eurostas ary mamela antsika hanao fanadihadiana ampitahaina amin'ny loharano sy ny vanim-potoana samihafa. Etsy ankilany, tsy mamela antsika hanondrana ny sary izy, na dia azontsika atao aza ny mahazo ny kaody mora ampidirina ao amin'ny pejintsika na maka pikantsary mivantana raha mila izany amin'ny endrika sary isika.
Safidy tena manintona izy io satria manome antsika ny fahafaha-manao an-tsoratra ny tenantsika aminy sy mamolavola ary mamorona ny infografika. Avy amin'izany no ahafahanao miditra antontanisa marobe sy angon-drakitra an'izao tontolo izao ary koa mamorona sarintany mifandray na infografika mavitrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Solony 8 hamoronana infografika haingana
Saripikan'i Istanbul namboamboarina tamin'ny endrik'ilay sarimihetsika Origin